Jeneraly Béni Xavier Rasolofoniriana : “Tsy azo hanaovana amboletra ny faritra mena” -
AccueilSongandinaJeneraly Béni Xavier Rasolofoniriana : “Tsy azo hanaovana amboletra ny faritra mena”
Jeneraly Béni Xavier Rasolofoniriana : “Tsy azo hanaovana amboletra ny faritra mena”
12/05/2018 admintriatra Songandina 0
Nohamafisin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Béni Xavier Rasolofoniriana fa tsy azo hanaovana amboletra ny faritra mena sy ny faritra voahodidina saina. Tafiditra ao anatin’izany ny toby miaramila, ny banky foiben’i Madagasikara, ny toerana fanapahan-kevitra sy izay mety ho fananana iombonana rehetra. Nambarany fa matoa noraisina ireny fepetra ireny, dia fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, fampanjakana ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana no tanjona voalohany indrindra ao ambadik’izany.”Eritreretinay fianakaviamben’ny Foloalindahy fa olon-kendry sy manampanahy ny vahoaka malagasy ka mahafantatra ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao”, hoy ny voalazan’ity minisitry ny Fiarovam-pirenena ity. Iza amin’ireo mpanao politika tokoa moa no tsy mahafantatra fa toerana saropady, ary tsy azo hivalozana ny fiarovana ny faritra mena saingy mazava ny tian’izy ireo hahatongavana, dia ny hanao sorona ny olom-pirenena mba entina handotoana ny tanan’ny mpitondra.
Nomarihin’ity tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny tafika malagasy ity ihany koa fa isika Malagasy, dia tsy sasatra ny manangana ary tsy sasatra manimba ihany koa. Manoloana izany, dia nanaitra ny sain’ny rehetra ny tenany fa tokony haravona izao savorovoro eto amin’ny firenena izao mba tsy hiteraka krizy hampikatso sy hahalatsaka ny nosintsika indray, izay fahapotehana mateti-piavy. Tokony homena lanja hoy izy ny fahamarinan-toerana. Omaly moa no nanaovana ny fitaizam-panahin’ny Foloalindahy tetsy amin’ny Fiangonana Iraisam-pinoan’izy ireo etsy Ampahibe. Isan’ny nampiavaka io fotoana io ny fitondrana am-bavaka ny firenena sy ny fanatanterahan’ireo miaramila ny asany indrindra amin’izao fotoan-tsarotra lalovan’i Madagasikara izao. Ny fitondram-bavaka ireo mpanelanelana na teratany vahiny io na teratany malagasy, ary tsy nohadinoin’izy ireo tao anatin’izany ihany koa ireo mpanao politika niteraka izao korontana izao. Ankoatra ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, dia tonga nanatrika io fotoan-dehibe omaly io ihany koa ny sekereteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena , ny Jeneraly Randriamahavalisoa Girard, sy ny kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa.
Nampahafantatra ny manampahefana Malagasy ny governemanta Frantsay fa tafiditra ao anatin’ny lisitry ny olona karohana any Frantsa i Houcine Arfa amin’izao fotoana taorian’ny fangatahana nataon’ny fanjakana Malagasy ary naneho ny fahavononany hitondra ny raharaha eo ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : « Ny asa ihany no hitondra amin’ny fampandrosoana »